Qaraxyo hor leh oo laga cabsi qabo in ay ka dhacaan Magaalada Muqdisho (Warbixin) | Baydhabo Online
Qaraxyo hor leh oo laga cabsi qabo in ay ka dhacaan Magaalada Muqdisho (Warbixin)
Qaraxyo hor leh, ayaa laga cabsi qabaa in ay ka dhacaan Magaalada Muqdisho, ka dib muddo toddobaad ah oo saddex ismiidaamin ah ay ka dhacday Caasimadda Somaliya.
Ismiidaamintii 1-aad, ayay Sabtidii ka dhacday Check Point ku yaala Siinka Dheer, ka dib gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo halkaasi lagula eegtay Ciidanka Nabad Suggida, xilli ay baaritaan marsiinayeen.
Ismiidaamintii 2-aad, ayaa waxay Axadii ka dhacday afaafka hore ee Dekeda Magaalada Muqdisho, waxaana ku dhintay dadkii ugu badnaa oo rayid ah, sida ay sheegeen Saraakiisha Dowladda.
Ismiidaamintii 3-aad waxay shalay ka dhacday wadada horumarta maqaaxida The Village ee Degmada Xamar Weyne. Qarax kale oo khasaaro badan sababay, balse aan ismiidaamin ahayn, ayaa isla shalay ka dhacay Isgoyska Ex Control Afgooye, waxaana ku dhintay toddobo askari, halka lix iyo toban kale oo rayid u badnaana ay ku dhaawacantay.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in la soo gaarsiiyay qaraxyo hor leh, oo ay maleygayan maleeshiyada Ururka Al Shabaab.
Saraakiishu waxaa la leeyahay waxaa ay ku daba jooggaan gaadiid loo far muuqay, kuwaa oo ay ku raran yihiin qaraxyo la doonayo in lagu qalqal-geliyo xasiloonida Muqdisho.
Sirdoonka Dowladda, ayaa sidoo kale lagu wargeliyay in ay kordhiyaan, isla-markaana ay isha ku hayaan dhaq dhaqaaqyada garaashyada ku yaala Caasimadda Muqdisho, xilli ay garaashyadu noqdeen kuwa ugu badan ee lagu tuhmo in lagu soo diyaariyo qaraxyada.
Ilo wareedyo muhiim ah, ayaa Dhacdo.com u sheegay in Shabaabku ay Magaalada Muqdisho soo geliyeen dagaal-yahano fara-badan, si ay u fuliyan dhagaraha ay qorsheynayan. Sarkaal ka tirsan Taliska Nabad Suggida, ayaa inoo sheegay in ay ka war hayaan dagaal-yahanada gudaha loo soo geliyay magaalada, isla-markaana ay ku daba jooggaan.
Qaraxyadan, ayaa dareen baqdin leh ku dhaliyay bulshada ku dhaqan Magaalada Muqdisho, waxayna dadku yihiin kuwo ay dhegta u taagan tahay. Hadalhaynta ugu badan waxay noqotay qaraxyada isa soo taraaya, iyadoona ay ku soo beegmayan, xilli lagu mashquulsan yahay arrimaha doorashooyinka dalka.
C/fitaax Cumar Xalane, Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa qaraxyada xargaha goystay ee ka dhacaaya Caasimadda ku sheegay kuwo aan wax ujeedo ihi lahayn, isla-markaana ay hadaf la’aan isu qarxinayan mintidiinta.
Inta badan qaraxyadan, ayaa waxyeelada ugu badan waxaa ay ka soo gaartaa dadka rayidka ah, waxaana muuqata inaanan laga hortaggi karin, illaa iyo inta ay shacabku ka soo baraarugayan.
Yuusuf Xuseen Jimcaale (Boorsaani), Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, ayaa Talaadadii dadka reer Muqdisho ku eedeeyay in ay hagar ku jirto.
Duqa Muqdisho waxaa uu aaminsan yahay haddii dadku si buuxdo ula shaqayn lahaayen hay’adaha ammaanku, in kol hore laga gudbi lahaa qaraxyada ay calanka u sidaan kooxaha nabadiidka.